Pantone mandefa ny fitsapana loko IQ miloko ho an'ny artista, mpamorona ary matihanina | Famoronana an-tserasera
Pantone's Color IQ Test dia fitsapana ho an'ny mpamorona hanafainganana ny fahaizany amin'ny loko
Color IQ Test dia andiana fitsapana izay tena mitovy amin'ny lalao noresahintsika volana vitsivitsy lasa izay. Tiako ny hue dia iray amin'ireo lalao mahafinaritra ahafahantsika mamerina mametraka ny feo samihafa amin'ny andian-dahatsoratra miloko mba hamoronana ilay gradient izay nampianarina antsika tamin'ny fiandohan'ny lalao.
Ary izao no mitovy amin'izay atolotry Pantone miaraka amin'ny Color IQ Test ary izany fomba fitsapana ny fahaizanao manavaka ireo tonony samihafa hamoronana gradients. Fitsapana mahaliana kokoa noho ny miasa miaraka amin'ny loko ary avy eo afaka mampihatra ny fahalalana amin'ny sehatry ny asa samihafa.
Tsotra ihany ilay zavatra. Tsy mila mandamina ny feo fotsiny ianao mba hamoronana gradien-loko amin'ny alàlan'ny filaharana ireo singa nafindra ao anatin'ny tsipika tsirairay. Araka ny efa nolazainay dia soratana amin'ny lalao Tiako ny hue fa misy ho an'ny finday.
Izy io koa dia misy ifandraisany akaiky amin'ny Farnsworth Munsell 100 Shade Color Vision Test. Azo atao ny manao fitsapana avy amin'ity rohy ity, ary tsy handany anao mihoatra ny minitra vitsy hanaovana izany.
Ny mahasamihafa ny lalao voalaza etsy ambony dia ny fananana ambaratonga marobe, noho izany raha tianao ny miala voly sy manao fanazaran-tena miaraka amin'ny lokoAnkoatran'ity fitaovana Pantone ity dia mamporisika anao izahay hanandrana azy, satria mahatalanjona fotsiny ny traikefa omeny.
Miankina amin'ny fahaizanao izany, mety handany fotoana bebe kokoa na kely ianao, satria miatrika rindrambaiko web iray izay Pantone mihitsy izahay manoro hevitra ny fanamafisana ny monitor hahafahana manavaka tsara ny gamut loko.
Rehefa vonona ny gradient anao dia mila tsindrio fotsiny ny "Score my test" hahitanao ny valiny. Ho a pie chart izay manondro ny faritra misy ny lokon'ny loko izay ambany ny fanavakavahana ny lokonao.
Una fitaovana tsara ho an'ny karazana mpanakanto rehetra, mpamorona sy matihanina miasa miaraka amin'ny loko.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Pantone's Color IQ Test dia fitsapana ho an'ny mpamorona hanafainganana ny fahaizany amin'ny loko
Adobe Photoshop Express dia manampy sticker, blur effects ary maro hafa amin'ny kinova vaovao
'Unignorable' no loko vaovao novolavolain'i Pantone ary tsy azo odian-tsy hita